Iliad အားပြန်သွင်းနည်း- အဆင့်ဆင့်
Iliad သည် တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ပြင်သစ် ကြိုတင်ငွေပေးကတ် အော်ပရေတာမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း လစဉ်အခကြေးငွေကို မပေးဆောင်လိုသော သို့မဟုတ် မပေးဆောင်နိုင်သော သုံးစွဲသူများအားလုံးကြား သိသာထင်ရှားသောကွာဟချက်တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည့် အော်ပရေတာတစ်ခုနှင့် အဆက်အသွယ်ရှိရန် တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်ခွင့်မှာ ကြိုတင်ငွေပေးကတ်မှတစ်ဆင့်ဖြစ်သည်။
ရရှိနိုင်သောရွေးချယ်စရာအရေအတွက် Iliad ကြိုတင်ငွေပေးဖုန်းကတ်များကို အားပြန်သွင်းပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သမားရိုးကျဘဏ်စနစ်မှ ဤကုမ္ပဏီတွင် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ မတူညီသော အားပြန်သွင်းသည့်အချက်များအထိ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်သောကြောင့် ၎င်းတို့သည် အလွန်ကျယ်ပြန့်ပါသည်။
ကွဲပြားသောနည်းလမ်းများကို သိရှိလိုပါက ပေးနိုင်ပါသည်။ Iliad ကြိုတင်ငွေပေးကတ်ကို ပြန်ဖြည့်ပါ။မင်းရဲ့လိုအပ်ချက် ဒါမှမဟုတ် ဖြစ်နိုင်ချေနဲ့ အကိုက်ညီဆုံးကို ရှာတွေ့တဲ့အထိ ဆက်ဖတ်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
ကြိုတင်ငွေပေးကတ်အားလုံးတွင် ထုံးစံအတိုင်း၊ ၎င်းတို့သည် ဘဏ် သို့မဟုတ် တယ်လီဖုန်း (အသုံးအများဆုံး) ဖြစ်စေ၊ အရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ မိုဘိုင်းအပြင်အဆင်အတွက် အက်ပ်ကို အသုံးပြုပါ။ကျွန်ုပ်တို့တွင် ခရက်ဒစ် သို့မဟုတ် ဒက်ဘစ်ကတ်တစ်ခုရှိသရွေ့၊
သို့သျောလညျး Iliad မရှိပါ။လောလောဆယ်တွင်၊ မိုဘိုင်းလ်စက်ပစ္စည်းများအတွက် အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် ပြန်လည်အားဖြည့်မှုများကို စီမံခန့်ခွဲရန် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်း သို့မဟုတ် တက်ဘလက်မှ ၎င်း၏ဝဘ်ဆိုဒ်မှတစ်ဆင့် ၎င်းမှတစ်ဆင့်၊ link ကို.
Iliad ဝဘ်ဆိုဒ်ကနေတစ်ဆင့် ကျွန်တော်တို့မှာ သုံးနိုင်ပါတယ်။Visa သို့မဟုတ် Mastercard ဒက်ဘစ် သို့မဟုတ် ဒက်ဘစ်ကတ်. ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ ကြိုတင်ငွေပေးကတ်များဖြင့် အဆိုပါအကောင့်များကို ပြန်လည်အားဖြည့်နိုင်စေပါသည်။ PayPal က နှင့် Postepay နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ စစ်ဆေးခြင်းအကောင့်သို့ ငွေတောင်းခံခြင်း။
ဒါကိုလည်း ငါတို့က ထူထောင်လို့ရတယ်။ အားပြန်သွင်းခြင်းသည် အလိုအလျောက်ဖြစ်သည်။ဆိုလိုသည်မှာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် လက်ကျန်ငွေကုန်သွားသောအခါ သို့မဟုတ် လတိုင်းတွင်၊ ငွေပြန်သွင်းခြင်းကို အလိုအလျောက်ပြုလုပ်ပြီး လျှောက်လွှာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ချိတ်ဆက်ထားသောကတ်သို့ ကောက်ခံမည့်ပမာဏကို ဆိုလိုပါသည်။
ဒါပထမဆုံးအကြိမ် ကျွန်တော်တို့ကို အားပြန်သွင်းရင် ပထမဆုံးလုပ်ရမယ့် အရာပါ။ ခရက်ဒစ်ကဒ်တစ်ခုနှင့်ဆက်စပ်ပါကျွန်ုပ်တို့၏အကောင့်နှင့် ဆက်နွယ်နေမည့် ခရက်ဒစ်ကတ်။
သုံးစွဲရဖွယ်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဏ်လျှောက်လွှာ ပြန်လည်အားသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ပထမဆုံးအကြိမ် အတည်ပြုရန်။ ပထမအကြိမ် ငွေပြန်သွင်းပြီးသည်နှင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဏ်၏ လျှောက်လွှာကို မလိုအပ်တော့ပါ။
ပြန်လည်ဖြည့်တင်းမှုတွေ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ 5၊ 10၊ 15၊ 20၊ 25၊ 30 သို့မဟုတ် 50 ယူရိုအပိုင်း Recarica il tuo Número မှတဆင့်။
ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုပါတယ် လက်ကျန်ကို သိတယ်။ အချိန်တိုင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့ပေးပို့ထားသော ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့် SMS ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို တိုင်ပင်ပါ။
လက်ကျန်ငွေအားပြန်သွင်းပါက ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင့်ကိုစစ်ဆေးပါ။အပလီကေးရှင်းတွင် ထည့်သွင်းရန် အကောင့်၏ IBAN ကို လိုအပ်ကြောင်းနှင့် ၎င်းအပြင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရက်ဒစ်ကတ်ကို အသုံးပြုပါက လုပ်ငန်းစဉ်ထက် နှေးကွေးကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ သတိပြုရမည်ဖြစ်သည်။
ဤနည်းလမ်းကို အသုံးပြုသောအခါ၊ အားပြန်သွင်းရန် လိုအပ်သည့်အချိန်သည် စက်ပစ္စည်းသို့ရောက်ရှိရန် လိုအပ်သည်။23 ရက်ပိတ်ရက်မှာ အားပြန်သွင်းမလား ဒါမှမဟုတ် အားလပ်ရက်ကြားမှာ ကျရောက်တဲ့အပေါ် မူတည်ပါတယ်။
Si သင့်လက်တွင် သင့်စမတ်ဖုန်းမရှိပါ။ဝဘ်သို့လာရောက်လည်ပတ်သော ကွန်ပျူတာမှ တစ်ဆင့် အားပြန်သွင်းနိုင်ပါသည်။ link ကို.
သင့်စကားဝှက်နှင့်အတူ ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင့်အချက်အလက်ကို ထည့်သွင်းပြီးသည်နှင့်၊ ညာဘက်ကော်လံတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ သွားပါ။ Credit စားသုံးပါ။. ထို့နောက်၊ သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်စွဲနှင့် CVV (ခရက်ဒစ်နှင့် ဒက်ဘစ်ကတ်များနောက်တွင် ဂဏန်း3လုံး) နှင့်အတူ ကတ်ကိုင်ဆောင်သူ၏အမည်ကို ထည့်သွင်းရပါမည်။
ဤကဏ္ဍမှတဆင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဏ်အကောင့်၏ဒေတာကိုလည်း ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကြိုတင်ငွေပေးကတ်သို့ လက်ကျန်ငွေလွှဲပြောင်းမှု ပြုလုပ်ပါ။. ကျွန်ုပ်တို့တွင် သတ်မှတ်ထားသော အချိန်တစ်ခုအတွက် အလိုအလျောက် ငွေဖြည့်သွင်းမှုများတွင် ပုံသေဖြစ်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့တည်ထောင်ထားသော အကောင့်ကို configure လုပ်ရန် ရွေးချယ်ခွင့်လည်းရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် မိုဘိုင်းလ်စက်ပစ္စည်းများအတွက် အပလီကေးရှင်းကို အသုံးပြုသကဲ့သို့၊ သင်သည် ဤနည်းလမ်းကို အသုံးပြုပါက၊ IBAN အပြည့်ရှိဖို့လိုတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင့်မှ ဤနည်းလမ်းသည် တနင်္ဂနွေအားလပ်ရက်အတွင်း သို့မဟုတ် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များတွင် အားပြန်သွင်းခြင်းအပေါ် မူတည်၍ ပျမ်းမျှ2ရက်မှ3ရက်အထိ ကြာပါသည်။
ဒါဟာအရေးကြီးပါတယ် သတိထားပြီးကြိုတင်ထားပါ။ နောက်ဆုံးနေ့ကို စောင့်ဆိုင်းပြီး လွှဲပြောင်းရောက်ရှိရန် လိုအပ်သည့် နေ့ရက်များအတွင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ နှုန်းထား၏ ကုန်ဆုံးသည့်နေ့အထိ။
ငွေပေးချေမှုပလက်ဖောင်းများထဲမှတစ်ခု ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင် အပျံ့နှံ့ဆုံးနှင့် လူကြိုက်အများဆုံးPayPal သည် Elon Musk သည် အခြားသူများနှင့် တည်ထောင်ခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် အနှစ် 20 ကျော်ရှိပြီဖြစ်သည်။
ဤပလပ်ဖောင်းသည် စံပြဖြစ်သည်။ အွန်လိုင်းမှ အန္တရာယ်ကင်းစွာ ဝယ်ယူပါ။ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဏ်ကတ်ကို အသုံးမပြုဘဲ အီးမေးလ်အကောင့်တစ်ခုမှတစ်ဆင့် ငွေပေးချေနိုင်စေသောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင့်တွင် လက်ကျန်ငွေအလုံအလောက်မရှိသည့်အခါ ငွေပေးချေရန်အတွက် ပလပ်ဖောင်းအတွင်းသာရရှိနိုင်သော ဘဏ်ကတ်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့တွင် PayPal အကောင့်တစ်ခုရှိလျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကြိုတင်ငွေပေး Iliad ကတ်ကို အားပြန်သွင်းရန် ၎င်းကို အသုံးပြုနိုင်သည်။. မကြာသေးမီအထိ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤကတ်အမျိုးအစားကို မည်သည့်ကုန်သည်တွင်မဆို ဝယ်ယူနိုင်သော်လည်း၊ သို့သော် ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ ဤပလပ်ဖောင်းမှ Iliad ကြိုတင်ငွေပေးကတ်ကို ထပ်ဖြည့်ရန် ရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါက ၎င်းတို့ကို အချိန်အတန်ကြာ မရနိုင်တော့ပါ။
ဤပြင်သစ်အော်ပရေတာ၏ဖောက်သည်များအားလုံးအတွက် Iliad မှယောက်ျားလေးများရရှိနိုင်သည့်နောက်ထပ်နည်းလမ်းမှာ မတူညီသောရာထူးများကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ ထီအုပ်ချူပ်ရေးသည် နိုင်ငံတဝှမ်းတွင် ပျံ့နှံ့နေသည်။
ဤနေရာများတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရက်ဒစ်နှင့် ဒက်ဘစ်ကတ် နှစ်မျိုးလုံးကို သုံးနိုင်သည် သို့မဟုတ် သုံးနိုင်သည်။ ငွေသား။
အပလီကေးရှင်းနှင့် ထီစီမံခန့်ခွဲမှုများမှတစ်ဆင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ Iliad ကြိုတင်ငွေပေးကတ်ကို ပြန်လည်အားဖြည့်နိုင်စေမည့်အပြင် သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ ကြိုတင်ငွေပေးကတ်များကို ကွဲပြားခြားနားစွာ အားပြန်သွင်းရန် ရွေးချယ်ခွင့်လည်းရှိသည်။ Simbox ဂိတ်များ ကုမ္ပဏီက နိုင်ငံအနှံ့ ဖြန့်တယ်။
ဤ terminals များကို ယေဘုယျအားဖြင့် တွေ့နိုင်သည်။ စျေးဝယ်စင်တာများ၊ မက်ထရို၊ ဘတ်စ်ကားနှင့် ရထားဘူတာများ နှင့် အခြားလူများသောနေရာများ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကြိုတင်ငွေပေး Iliad အကောင့်ကို ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းရန် အသုံးပြုနိုင်သည့် တစ်ခုတည်းသောငွေပေးချေနည်းလမ်းမှာ မည်သည့်ဘဏ်၊ PayPal သို့မဟုတ် Postepay ကတ်မှမဆို ခရက်ဒစ် သို့မဟုတ် ဒက်ဘစ်ကတ်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။
နာနတ်စက်များ၊ Simbox နဲ့ ဆင်တူပါတယ်။စျေးဝယ်စင်တာများ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဘူတာများနှင့် လူစည်ကားသောနေရာများတွင်လည်း တွေ့ရှိနိုင်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကြိုတင်ငွေပေး Iliad ကတ်ကိုလည်း အားပြန်သွင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Simbox terminals များကဲ့သို့ပင်၊ ရရှိနိုင်သောတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ မည်သည့်ဘဏ်မှ ခရက်ဒစ် သို့မဟုတ် ဒက်ဘစ်ကတ်။
ဖုန်းငွေဖြည့်ပါ » ကုမ္ပဏီများ » Iliad ကိုဘယ်လိုအားသွင်းမလဲ